काँग्रेसमा टिकटको राजनीति « Surya Khabar
डा. शोभाकर पराजुली/ स्थानीय तहको निर्वाचन अव हुन्छ नै । संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा पो अब टर्ने वाला छैन । निर्वाचन हुने निश्चित भैसकेपछि राजनीतिक दलहरुभित्र टिकटको महत्वाकांक्षा राख्नेहरु जुर्मुराएका छन् । नेपाली काँगे्रस सत्रारुढ दल भएको हुनाले उसका दुईवटा प्राथमिकता हुन्छन् । एउटा, मुलुकभरी निर्वाचनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावण बनाउने । दोस्रो स्वयं आँफूभित्र सुयोग्य व्यक्तिलाई टिकट दिनु । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सत्रारुढ दल भएको नाताले निर्वाचन आयोगले आत्मसात् गरेको अभिष्टलाई सहयोग पु¥याउने हो । त्यो भनेको मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना स्वयं गर्ने र अन्य पक्षलाई पनि पालन गर्न अभिप्रेरित गर्न लगाउने हो ।
सरकारको नेतृत्व गरेको दल भएको हुनाले उसले स्वयं निर्वाचन आचारसंहिता पालन ग¥यो भने अरुहरु पनि त्यसको पालना गर्न हौसिन्छन् । जतिसुकै कमजोरी भए पनि काँग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । लोकतन्त्रको प्रश्नमा यो पार्टी अहिलेसम्म पछि हटेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जब जब निर्वाचन गराएको छ त्यो निर्वाचन विवादरहित भएको छ । अरु दलहरुले पनि पत्याएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय समुदायले वैधता दएको छ । नेपाली काँगे्रसका प्रधानमन्त्री स्वयं चुनाव हारेका छन् र कहिले स्वयं नेपाली काँग्रेस नै हारेको छ । यसरी नेपाली काँग्रेसद्धारा गरिने निर्वाचन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार भएको छ । यस्तो निर्वाचनले राजनीतिलाई गति दिएको छ र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यास अब्बल हँुदै गएको छ । नेपाली काँग्रेस केवल लोकतन्त्रलाई हेर्छ । उसको लोकतन्त्रभित्र राष्ट्र र जनता दुबै पर्छ । नेपाली काँग्रेस विश्वास गर्छ कि लोकतन्त्रले नै राष्ट्रको स्वाधिनताको रक्षागर्न सक्छ । भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग नेपालसंगको सीमा बिबादबारे खुलेर आफ्ना कुरा राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेस आफ्नै मुलुकभित्रका जनतालाई बिश्वास गर्छ । यसको गरिमा र महिमालाई मान्यता दिन खोज्छ । उसले आफ्नै जनतालाई कहिले आँप झ¥यो, कहिले बेल झ¥यो भनेर अपमानजनक बिम्ब प्रयोग गर्दैन । नेपाली काँग्रेस घृणाको राजनीति गर्दैन ।
निषेधको राजनीतिमाथि उसलाई बिश्वास छैन । स्थापनाकालदेखि नै नेपाली काँग्रेस व्यवहारमा समावेशी संगठन भएर बाँचेको छ । नेपाली काँग्रेस भू–रजनीतिक इन्द्धलाई एकअर्का विरुद्धको तुरुप बनाउदैन। बी.पी. कोइराला कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्रिका सामु लम्पसार परेनन् । न त बर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै नेपालसँग सरोकार राख्ने कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रलाई चिढ्याउने काम गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस चीन विरुद्ध भारत र भारत विरुद्ध चीनको आत्मघाती खेलमा लादैन । शेरबहादुर देउवाको अत्यन्त सुझबुझ एवं दुरदर्शी कुटनीतिक अभ्यासले गर्दा नेपालको बिश्वसनीयता अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बढ्दैछ । अर्थात् नेपाली काँग्रेस नै एउटा यस्तो दल हो जो आफूलाई मृत्युको मुखमा पारेर पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनु आफ्नो युगधर्म ठान्दछ । दुनियाँमा कही कतै पनि सामान्य अवस्थामा निर्वाचन गराउने सरकार प्रमुख वा दल हार्दैन । तर त्यो साहस र त्याग नेपाली काँग्रेसमै छ ।
टिकट वितरणको काम नेताहरुको भागबण्डाका आधारमा गरिनु हुँदैन कतिपय अवस्थामा भागबण्डाका कारणले आउनैपर्ने नेतृत्व वन्चितिमा पर्न सक्छ । नेतृत्वमा ल्याउनका लागि उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, उसको सार्वजनिक प्रतिवद्धता, उसको जीवनसैलीको पारदर्सिता र पालिकाबारे उसले प्रस्तुत गर्ने प्रारुपका आधारमा तय गरिनुपर्छ । पार्टीले पनि केवल टिकट दिएर मात्र भएन रुख छापधारी कुनै पनि प्रत्यासले कसरी अँधिकतम मत ल्याउन सक्छ ? त्यसको पनि बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन उसले के ग¥यो ? कसरी ग¥यो ? त्यसको पनि लेखाजोखा राखिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसले वडातहदेखि नै समृद्धि, रुपान्तरण र बदलावको मूर्तरुप दिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्त सुझँबुझ र समझदारी देखाउनै पर्छ । स्थानीय सरकारमा राम्रा अभ्यासहरु थालनी गराउन स्थानीय तहमै राम्रा पात्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसले कालान्तरमा कहिल्यै पनि नहल्लिने गरी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ । स्थानीय सरकारको आकर्षण बढाउन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाँई संस्थागत गर्न पार्टी आफ्ना खजानाबाट संघीय संसद र प्रादेशिक सभामा प्रभावकारी भूमिका खेलेका, विभिन्न क्षेत्रमा अंबल प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यासी बनाउनुपर्छ । यसले दुईटा कुरा हुन्छ । स्थानिय तहदेखी नै दलमा असल कार्यकर्ताहरुको आपूर्तिहुन्छ । दोश्रो, आम जनमनमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा घट्दै जान्छ ।
nepali congress Shovakar Parajuli
स्थानीय तहको निर्बाचनः अस्थिरता अन्त्यका लागि पुरानालाई भन्दा नयाँलाई अघि सारौं